May 18, 2022 - Achawlaymyar
သား သမီး(၇)ယောကျကို ပွုစုပြိုးထောငျပေးခဲ့ပမေယျ့အသကျ၉၆နှဈအရှယျမိခငျတဈယောကျရဲ့ နဝေငျခြိနျ
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှ အသက်၆၉နှစ်အရွယ် မိခင်အိုကြီးတစ်ဦးသည် သားသမီး ၇ယောက်လုံးကို ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးခဲ့သော်လည်း မလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင်သည့်အရွယ်ရောက်သောအခါ မည်သူကမှ လှည့်ကြည့်ခဲ့ခြင်းမရှိပဲ ကပ်တွက်နေကြကာ အိမ်စုတ်လေးမှာတစ်ယောက်တည်း ချန်ထားခဲ့ကြသည်။ မိခင်ဖြစ်သူသည် ငယ်စဉ်က ပင်ပန်းဆင်းရဲစွာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည့် ဒဏ်ကြောင့် အိုမင်းလာသောအခါ မကြာခဏနေမကောင်းဖြစ်ပြီး အိပ်ရာထဲတွင်သာ အမြဲလိုလို လှဲနေခဲ့ရသည်။ မိခင်အိုကြီးရဲ့ သားသမီးတွေမှာ အရွယ်ရောက်သည်နှင့်အကုန်လုံးက အိမ်ထောင်တွေ ကျကုန်ပြီး အခြားရပ်ရွာသို့ ပြောင်းကုန်ကြကာနေမကောင်းသည့်အချိန်လေးတွင် အနားမှာရှိနေစေချင်တာကြောင့် “အမေက သားတို့သမီးတို့အပေါ်မှာ မကြိုက်တာတွေ အမှားတွေလုပ်မိသွားရင် တောင်းပန်ပါတယ်”ဟုဆိုကာ အိမ်ပြန်လာရန် မျှော်လင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ကံကောင်းစွာပဲ မိခင်အိုကြီးအား ဒေသခံများမှ အိမ်စုတ်လေးကို ဖျတ်ပြီးအသစ်ဆောက်လုပ်ပေးပြီးနောက် လိုအပ်သည့် ဆေးဝါးနှင့် စားစရာတို့ကို လှူဒါန်းပေးခဲ့သည်။ ခရက်ဒစ် Unicode ဖိလဈပိုငျနိုငျငံမှ အသကျ၆၉နှဈအရှယျ မိခငျအိုကွီးတဈဦးသညျ သားသမီး ရယောကျလုံးကို … Read more
အခဈြကို… ၁၅၀၀ အခဈြ နှငျ့ ၅၂၈ အခဈြဟူ၍ ဘာကွောငျ့ သတျမှတျ ချေါဆိုကွတာလဲ အခဈြအကွောငျး ပွောကွမယျဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့ မွနျမာလူမြိုး အမြားစုက “၁၅၀၀ အခဈြ” နဲ့ “၅၂၈မတ်ေတာ” ဆိုပွီး နှဈမြိုးခှဲပွောလေ့ ရှိကွတယျ။ သမီးရညျးစား အခဈြကို “၁၅၀၀ အခဈြ” ၊ ပူလောငျ ပွငျးပွတဲ့ အခဈြလို့ပွောပွီး မိဘတှရေဲ့ သားသမီးအပျေါခဈြတဲ့ အခဈြကိုတော့ “၅၂၈ မတ်ေတာ” ၊ အေးမွ ခမျြးမွတေဲ့ ခဈြခွငျး မတ်ေတာ ဆိုပွီး ယူဆ ပွောဆိုလေ့ ရှိပါတယျ။ ဘာလို့ (၁၅၀၀) ရှိနရေတာလဲ၊ (၅၂၈) ဆိုတာကကော ဘာလို့ ဖွဈလာရတာလဲ . .။ ပူလောငျတဲ့ အခဈြမို့ ၁၅၀၀ … Read more
စှယျစုံရ နိုငျငံကြျောအဆိုတျော ခွိမျ့ကကေို ရဲ့ ခွငျခတျစှမျးရညျပွ (ရုပျသံ)
စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ခြိမ့်ကေကို ရဲ့ ခြင်ခတ်စွမ်းရည်ပြ (ရုပ်သံ) စွယ်စုံရ … Read more
ဝဠေုကြျောနဲ့ ပတျသကျပွီး ထပျပွောလာတဲ့ မျောဒယျသငျးသငျး
ဝဠေုကြျောနဲ့ ပတျသကျပွီး ထပျပွောလာတဲ့ မျောဒယျသငျးသငျး ဝေဠုကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြောလာတဲ့ မော်ဒယ်သင်းသင်း ဝေဋ္ဌုကျော်နဲ့ ပြသနာ ဖြစ်ထားလို့ သင်းသင်းကို လာ အထင်မသေးနဲ့ ရုပ်သံကြည့်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဝေဠုကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြောလာတဲ့ မော်ဒယ်သင်းသင်း ဝေဋ္ဌုကျော်နဲ့ ပြသနာ ဖြစ်ထားလို့ သင်းသင်းကို လာ အထင်မသေးနဲ့ ရုပ်သံကြည့်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဝေဠုကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြောလာတဲ့ မော်ဒယ်သင်းသင်း ဝေဋ္ဌုကျော်နဲ့ ပြသနာ ဖြစ်ထားလို့ သင်းသင်းကို လာ အထင်မသေးနဲ့ ရုပ်သံကြည့်ရန် အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဝေဠုကျော်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထပ်ပြောလာတဲ့ မော်ဒယ်သင်းသင်း ဝေဋ္ဌုကျော်နဲ့ ပြသနာ ဖြစ်ထားလို့ သင်းသင်းကို လာ အထင်မသေးနဲ့ ရုပ်သံကြည့်ရန် … Read more
သရကျသီး သတိထား စားကွတော့ ကွောကျစရာကောငျးနပွေီနျော
သရက်သီးသတိထားစားကြတော့ကြောက်စရာ…. မနေ့ညက ထမင်းစားပီး ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း စိန်တစ်လုံး သရက်သီး စားတယ်။စားတဲ့အချိန် ဘာအရသာမှ မရှိဘူး လုံးဝကိုမချိုတာ။ဒါမယ့် မသိဘူး ပုံမှန်ဘဲ ထင်တာစားပီး သိပ်မကြာဘူး ဗိုက်ထဲက ထိုးအောင့်လာတယ် အိမ်သာ တက်ချင်လာတယ် အဲ့ဒါနဲ့ အိမ်သာထဲ ဝင်လိုက်တယ် ရေချိုးခန်း နဲ့အိမ်သာကတွဲရက် ဘိုထိုင်ပေါ်ထိုင်နေရင်းဗိုက် အရမ်းအောင့်လာတယ် အန်ချင်လာတယ် ချွေးစေးတွေထွက်လာတယ် မျက်လုံးတွေ ပြာလာတယ်။သန့်ရှင်းရေး မြန်မြန်လုပ်ပီး ရေပန်းအောက် ခဏထိုင်တုန်း အန်ချင်လာတယ်အန်တယ် မရဘူး အိမ်သာပေါ်ပြန်ထိုင်တယ် လူက ခွေကျလာပီးရေချိုးခန်းထဲ လှဲအိပ်ချင်တာ တားမရဘူး။ဇောချွေးတွေ ရွဲနှစ်ပီး မျက်လုံးထဲ ဘာမှ မမြင်ရတော့ ဘူးထိုးအန်တယ် သရက်သီးတွေ ဗိုက်လဲ အရမ်းအောင့်ပီး သေပီဘဲ ထင်တာ ခံစားမှုက ငါသေတော့မှာလို့ တွေး လိုက်တယ်ငါသေရင် ဘာမှ မှာရမယ့်ဟာ … Read more
အခကျအခဲတှရှေိသျောလညျး စှနျ့လှတျမသှားရကျပဲ ရခေဲမုနျ့ရောငျးရငျး seemore
အခကျအခဲတှရှေိသျောလညျး စှနျ့လှတျမသှားရကျပဲ ရခေဲမုနျ့ရောငျးရငျး မသနျစှမျးသူသားလေးအား ရှာဖှကြှေေးနသေော ကွငျဖျောမဲ့ဖခငျ မိဘတို့သညျ ပငျပနျးဆငျးရဲစှာ လုပျကိုငျစားသောကျရသျောလညျး သားသမီးလေးတှေ ရှိသေးသညျဆိုတဲ့စိတျနဲ့ လကျမလြှော့ပဲ အားတငျးကာ ကြှေးမှေးစောငျ့ရှောကျလကျြရှိသညျ။ သို့ဖွဈ၍ ထိုငျးနိုငျငံရှိ လမျးမပျေါတှငျ မသနျစှမျးဖွဈနသေော သားလေးကို လှညျးတှငျတငျကာ မမောနိုငျ မပနျးနိုငျ ရခေဲမုနျ့ရောငျးခပြွီးအသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွုနရေသော သားအဖနှဈယောကျဧ။ျ အဖွဈမှာ သနားဂရုဏာသကျမိသညျ။ ကလေးဧ။ျ မိခငျဖွဈသူမှာ ၈လသားအရှယျ ကတညျးက မသနျစှမျးသော လက်ခဏာဖွဈနသေညျကို သိရှိသှားပွီး ကိုယျလှတျရုနျးသညျ့အနနှေငျ့ သနားစရာ သားအဖနှဈယောကျကို ထားပဈခဲ့သညျ။ထို့ကွောငျ့ အမြိုးသားခမြာ ကွငျဖျောမဲ့ ဖခငျတဈယောကျဖွဈလာခဲ့ပွီး သားကလညျး ကနျြးမာရေး ခြူခြာကာ ဆေးဖိုးဝါးခ နှငျ့ စားဝတျနရေေးအတှကျ နစေ့ဉျ ၆ကီလိုမီတာ အကှာအဝေးထိတှနျးလှညျးလေးတှနျးကာ ရခေဲမုနျ့အား ရောငျးခခြဲ့သညျ။ အမြိုးသားသညျ ကုနျဈေးနှုနျးအရ အရငျးနှငျ့ … Read more
Fbပျေါကတှတေဲ့ခဈြသူကအရငျပတျသကျခဲ့သူမြားနဲ့လိုငျးပျေါမှာပွနျခဈြကွညျနူးနလေို့ကောငျလေးဖွဈသူမှ..See more. .
Fbပျေါကတှတေဲ့ခဈြသူကအရငျပတျသကျခဲ့သူမြားနဲ့လိုငျးပျေါမှာပွနျခဈြကွညျနူးနလေို့ကောငျလေးဖွဈသူမှSee more လှညျးကူးမွို့နယျ အောငျမင်ျဂလာရပျကှကျ သီတာအေး (၂)လမျး နအေိမျ တဈခုအတှငျး အမြိုးသမီးအလေ-ာငျးတဈလောငျးအား ဒဏျရာမြားဖွငျ့တှရှေိ့ရသဖွငျ့ လှညျးကူးမွို့မရဲစခနျး အမှုကွီးပုဒျမ 302 ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ စုံစမျးခဲ့ ပွဈမှုကြူးလှနျသညျဟုယူဆရသညျ့ မသင်ျကာတရားခံအား မူခငျးနှိမျနှငျးရေး တပျဖှဲ့ဝငျမြား၊ ရနျကုနျတိုငျး ရဲတပျဖှဲ့မွောကျပိုငျး ခရိုငျရဲတပျဖှဲ့ လှညျးကူးမွို့မရဲစခနျးမှုးဦးစီးအဖှဲ့ တို့မှပေါငျးစပျညှိနိုငျးဖျောထုတျခဲ့ရာ တရားခံဟုယူဆရသော ပိုငျလငျးထှနျး(ခ)ပိုငျပိုငျ(20)နှဈ(ဘ)ဦးတငျထှနျး ကြုံကဒှနျး ကြေးရှာ ဖြာပုံမွို့နယျ နသေူအား လှိုငျသာယာအရှပေို့ငျးမွို့နယျ အဆောငျတဈခုမှ ဖမျးဆီးရမိခဲ့။ ( ကနဦး ဖျေါထုတျသိရှိရခကျြ) ၎င်းငျးအား fb ပျေါမှ သိကြှမျးခငျမငျရငျးနှီးခဲ့ပွီး ခဈြသူမြားဖွဈသှားခဲ့ကွောငျး၊ မဖွဈမီ ၂ ပတျအလိုက ခဈြသူဖွဈခဲ့ကွောငျး၊ အခငျးဖွဈနကေ့ နအေိမျသို့ အလညျရောကျရှိခဲ့ပွီး အတူရှိနစေဉျ သဆေုံးသူအမြိုးသမီးမှာ fb လိုငျးသုံးနပွေီး ယခငျသူ နှငျ့ … Read more
ရှဈေေးနီးပါးဈေးတကျနတေဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးက ဆံပငျဈေ
ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မှာ ဆံပင်တစ်ပိဿာဈေး ရွှေဈေးနီးပါး ကျပ်သိန်း၂၀လောက်ရနေ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြည်ပပို့ကုန်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သော ဆံပင်ဈေးကွက်မှာ လက်ရှိ တစ်ပိဿာကို အတိုအရှည်လိုက်ပြီး ကျပ် နှစ်သိန်းခွဲမှ ကျပ် သိန်း ၂၀ ဝန်းကျင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေေ ကြာင်း ပုသိမ်မြို့ရှိ ဆံပင်ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရပါတယ်။ဆံပင်ဈေးကွက်မှာ ယခင်က မူဆယ်မှ တစ်ဆင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့သာအဓိက တင်ပို့ရောင်းချမှုရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ်ပိုင်းဈေးကွက်ပြောင်းလဲသွားပြီး ပြည်တွင်းတွင်နေထိုင်သော ပြည်ပနိုင်ငံသားများနှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများမှ အဝယ်ဒိုင်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကာ ဝယ်ယူကြကြောင်း သိရပါတယ်။ credit Unicode ဧရာဝတီတိုငျး ပုသိမျမှာ ဆံပငျတဈပိဿာဈေး ရှဈေေးနီးပါး ကပျြသိနျး၂၀လောကျရနေ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီးအတှငျး ပွညျပပို့ကုနျမြားတှငျ တဈခုအပါအဝငျဖွဈသော ဆံပငျဈေးကှကျမှာ လကျရှိ တဈပိဿာကို အတိုအရှညျလိုကျပွီး ကပျြ နှဈသိနျးခှဲမှ ကပျြ သိနျး ၂၀ ဝနျးကငျြအရောငျးအဝယျဖွဈနေေ … Read more
အမျိုးသမီးတို့၏ မျက်နှာပေါ်မှ ကောင်းသောနေရာတွင်ရှိသည့် မှဲ့ အမျိုးအစား (၁၀) ခု အမျိုးသမီးတို့၏ မျက်နှာပေါ်မှ ကောင်းသောနေရာတွင်ရှိသည့် မှဲ့ အမျိုးအစား (၁၀)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်…။ ၁။နဖူးပြင်ညာဘက်အခြမ်းတွင်မှဲ့ ရှိပါက ထိုအမျိုးသမီးသည် လွန်စွာကံကောင်းတက်၏။ ဘဝတွင် အစစ ရာရာအောင်မြင်၍ အသက်ရှည် ချမ်းသာစွာနေထိုင် ရတက်ပါတယ်။ ထိုအမျိုးသမီးများသည်ဘုန်းကံကြီးသော ၊ ရာထူးဂူဏ်ရှိန်ကြီးသော၊ ဉာဏ်ပညာကြီးသော အောင်မြင်သော သြဇာအာဏာရှိသော ယောင်္ကျားကိုရတက်သည်။ထိုအမျိုးသမီးကိုရသော အမျိုးသားများပင် ဘုန်းကံမြင့်သူများဖြစ်လာတက်ပါသည်။ ၂။ နဖူးအလယ်တည့်တည့်တွင် မှဲ့ ရှိပါက ထိုအမျိုးသမီးသည် မိမိအားလွန်စွာချစ်ခင် ကြင်နာသော မိမိဆွေမျိုးများအား လေးစားချစ်ခင်သော လိမ္မာယဉ်ကျေးသော ၊ မိမိကို အရာရာရှေ့တန်းတင်ဦးစားပေး တက်သော မိမိအားမြတ်နိုးတန်ဖိုးထားသော ၊ မိမိအပေါ်တွင်သစ္စာရှိသော ယောင်္ကျားကိုရရှိတက်သည်။ ယခင်က ဆိုးသွမ်းသော ယောင်္ကျားများပင်လျှင် မိမိနှင်ထပ်ပြီးပါက … Read more